SHARAXAAD KA KOOBAN NOOCYO IYO NOOCYO OF BERGENIA, SIDA LOO DOORTO NOOCYADA UGU FIICAN EE BEERTAADA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Badan - Tani waa caleemaha dhirta qoyan ee qoyaanka ah ee kilinigga ah ee kamida xayawaanka. Magaca Laatiin Bergenia waxaa lagu sharfay Karl Augusta von Bergen - Jarmalka Jarmalka, Professor at University of Viadrin, oo loo yaqaan 'bergenia' oo caan ah.
Magaca caan - Baydaan. Ku xirnaanshaha noocyadan dhirta ah ee qoysaska dhirta dhagax-dhagxaanta horeba waxay soo jeedinayaan in dhulgariirka uu yahay goobta Bergenia. Dabeecadda, Badan wuxuu ku koraa kaymaha buuraha buuraha, buuraha buurta ah iyo dhagaxyada meel sare oo ah 4500 m oo ka sarreysa heerka badda.
Warshadu waxay leedahay xidid qunyar ah, taas oo ay ku koraan, iyo laba nooc oo caleemo ah - rosettes iyo ubax. Peduncles waxay ku koraan dhammaan ubaxyada waxayna leeyihiin dherer 20 illaa 60 cm.
Faafin by abuur ama qaybta xididka. Bergenia waxaa ku jira toban nooc oo ah dhirta, kuwaas oo noocyo badan oo laga soo saaro. Aynu ka hadalno noocyada ugu waaweyn ee bergeniyada.
Ma taqaanaa? Bergenia waxaa ku jira glycosides, tannins, walxaha pectin iyo waxaa loo isticmaalaa daawada. Diyaargarowga Bergenia waxaa ku jira astaamo, antimicrobial, anti-bararka, guryaha hemostatic..
Badan qaro weyn
Waxaa lagu qaybiyaa Siberia, koonfurta bari ee Kazakhstan, Altai, waqooyiga Mongolia, Shiinaha, iyo Korea. CA caleemo dhirta uu leeyahay height ah ilaa 60 cm inta lagu guda jiro muddada fruiting. Ubaxyo lilac-casaan ah ayaa lagu ururiyey inflorescences cufan.
Saxanka Badan wuxuu leeyahay ubaxyo qaabaysan oo dhererkiisu yahay ilaa 12 mm, oo u dhexeeysa ilaa dhexe ilaa dabaqyo wareegsan. Peduncles waxaa laga yaabaa in la gooyo. Waxay ku jirtaa mid ka mid ah kan ugu horreeya, ubaxyada ilaa 50 maalmood.
Caleenta bergenia oo ballaaran, ilaa 20 cm ballaaran, dhaldhalaalaan, la ballaariyey si sare iyo ku wareegsan saldhig, midabka cagaarka qani ah, xilliga dayrta noqda casaan.
Qarax diirran, ilaa 3-5 cm dhexroor, huuri, laamo ku filan ku filan, sameynta cawska cufan. Badan qaro weyne ah - nooca ugu badan ee bergenia, sidaas awgeed waxaa badanaa loo isticmaalaa beerta.
Xagee ayuu badanaa koraa? Meelaha banaan iyo meelo har leh oo aan lahayn meel qoyan oo dheer. In hoos hoos oo caleemaha caleemaha ayaa weynaan doona.
Ma taqaanaa? Badan-dhadhanka waxaa lagu magacaabaa shaaha loo yaqaan Mongolian ama Chagir. Wixii diyaarinta cabitaankani waxay isticmaashaa caleenta, caleemaha, caleemaha cagaaran. Waa la dhaqaa, la qalajiyey, la jajabiyey, oo la shiiday sida shaah madow. Shandada Bergenia waxay leedahay hanti adag oo tayo leh.
In dabiiciga ah, loo qaybiyey koonfurta ee Bariga Fog. Caleemaha waa ukunta-qaabeeya, wedge-qaabeeya saldhigga, iyada oo leh gees koray, midab cagaaran dhalaalaya. Wuxuu ka baxaa illaa 9 cm oo ballaaran, illaa 15 cm oo dheer, ma dhaafin. Dhererka petioles wuxuu ka yar yahay dhererka saxanka caleen.
Qalabka ubaxa ee hooska casaanka ah ilaa 45 cm sare, waxaa laga yaabaa inuu leeyahay hal caleen caleen. Inflorescences ee midabka casaan iftiin ilaa 2 cm dherer. Waxay Blooms guga horraantii, blooms ee ku saabsan bil gudaheed, miraha bislaadaan June-August. Badan Pacific ayaa aad u la mid ah caleenta caleenta ah, laakiin caleemaheeda ayaa ka yaryar iyo ka hooseeya, iyo inflorescences ma aha mid qaro weyn.
Bermania wadnaha ku qaabeeya
Wadanka berdan wadnaha - Altai. Dhiso ilaa 40 cm dheer.
Caleemaha waa qalbi-qaabeeya, cufan, cagaar mugdi ah, jiilaal baraf ah.
Ubaxyada waa casaan-qaabeeya, laakiin waxaa jira noocyo leh ubax cad.
Muujinta jimicsiga. Muddada ubaxu wuxuu kudhowaad yahay 20 maalmood, siddeedda May.
Waa muhiim! Badan waa in la beeraa horraanta gu'ga ama xilliga dayrta. Asalka bergenia, beeray dayrta, si looga fogaado barafoobidda, waa in la daboolo caleemo qallalan. Marka la beero, xididka waa in lagu dhejiyaa dhulgariir, dhulka oo sii xajiya qiyaastii kala badh xajmiga, oo aan lagu aoownin.
Noocani waxay leedahay meelayn cidhiidhi ah oo kordhay kaliya galbeedka Tien Shan. Waxaa laga helay buundada isku dhafka ah ee khadka tareenka, kaas oo ah magaca noocyadaas. Waxay ku koreysaa sarajoog ah 2800 m oo ka sarreysa heerka badda. Aragti aad u yar.
Caleemooyinkeeda waa weyn, ilaa 13 cm ballaaran iyo ilaa 15 cm dheer, maqaar, dhalaalay, waxay leeyihiin muuqaal ah oval. Cidhifyada caleemaha leh ilkaha fiiqan, oo ay ku jiraan jaantuska safka labaad. Peduncles xoog leh, ilaa 30 cm sare, sida caadiga ah, leh hal caleen caleen.
Inflorescences qaro weyn. Ubaxyada Badana Umayamsky ilaa 1.8 cm dhererka, waxay ka kooban yihiin 5 midab oo ah midab casaan iyo casaan. Waxay ku jirtaa bilaha 7aad iyo 8aad. Khibradda koritaanka beeraha waa mid aan la aqoon.
Noocadani waxay leedahay matte, ellipsoid, cagaar madow oo cagaar ah ilaa 15 cm oo ballac ah iyo illaa 25 cm oo dherer ah oo leh geeso jug leh iyo petioles dheer.
Muuqaal farabadan oo noocyadaas ah waa qaabka caleemaha - saldhigga asliga ah waa meel yar oo u eg baalal.
Ubaxa iftiin-casaan-dhalaalaya, qulqulaya bilowgii ubax, soo ururiyey inflorescences cufan. Xilliga dayrta, caleemuhu waxay noqon karaan casaan qoto dheer, xitaa mugdi madow.
Tani waa aragtida ugu yar. markii hore laga soo qaatay Pamirs iyo Himalayas. Caleemooyinkeeda waa mid madow, oo qotodheer, qoto dheer oo qoyan dhinacyada, ilaa 10 cm oo dherer ah iyo illaa 5 cm oo ballaaran.
Caleemo qaboobaha jiilaalka. Peduncles waaweyn, ilaa 30 cm oo dheer, oo ubaxyada midab cad iyo midabka casaanka ah ayaa isku mar noqon kara. Jardiinooyinka Bloom ee May.
Ma taqaanaa? Badan qarnigii sagaalaad waxaa loo adeegsadaa farshaxan-yahanka loogu talagalay maqaarka iyo maqaarka madow ee madow iyo bunni.
Waxay ku koraan Tibet iyo Himalayas. Waxay soo gashay maskax ahaan, wadnaha oo hoos udhacay salka, caleemaha la daboolay nabraha ilaa 35 cm dhererka, cagaaran, iyo xilliga dayrta midabka guduudan-buluug, oo leh geeso jugged ah ama jugged ah.
Petioles aad u daacad ah. Peduncles cufan, ilaa 30 cm ee dhererka, oo leh ubaxyo badan oo waaweyn oo cad oo leh dabool casaan cirro ah, taas oo mugdi ah marka ubax. Marka dhaxan ay ka sarreeyaan 18 ° C, caleemaha waxay u dhintaan xilliga qaboobaha.
Noocyo aad dhif u ah, beerta ma'aha mid caadi ah. Waxay leedahay caleemo waaweyn oo cufan, caleemo qulqulaya oo qaabka qaabka ah, oo siman, oo leh geeso cufsan. Foornada ubaxa ilaa 20 cm ee dhererka. Burushka ubaxa wuxuu ka kooban yahay 6-8 ubax oo ku yaal hal dhinac. Ubaxku waxay leeyihiin 5 midab oo ah midab casaan ama midab cad.
Beelaha Badan waa noocyo badan oo kala duwan, laga soo gooyay noocyada kala duwan ee isticmaalka qurxinta ee beerta. Noocyo ka mid ah hybrid bergenia waa mid kala duwan.
Midabka ubaxa waxay ku kala duwan yihiin caddaan illaa lakac-guduud ah iyo midabo casaan ah. Caleemuhu waxay noqon karaan xajmiga iyo qaababka kala duwan oo leh cidhifyo jilicsan ama qallafsan, waxay leeyihiin midab ama midab leh ama midab leh oo digaag ah.
Waa muhiim! Haddii bergenia uusan ubaxo dhowr sano, waa in loo beddelo meel kale.
Tani waa nooc ka mid ah cirridka. Badan Himalayan, marka loo eego bergenii ciliate, wuxuu leeyahay caleemo yaryar, daboolay nacnaca dhinaca geesaha iyo dhinaca dambe, oo ku dhowaadba si toos ah uga soo horjeeda. Peduncles ilaa 30 cm dhererka, ubaxa waxay ku dhowyihiin caddaan oo leh garaac madow.
Bergenia waa mid fudud in la beerta beerta.
Xitaa haddii aad dhirtid noocyo kala duwan oo caadi ah oo ku yaala goob yar, Badan waxay soo nooleeyn doontaa guga, ku dar dhalaalista xagaaga oo si quruxsan u qurxin xilliga dayrta.